Mgbe ụfọdụ mmekọrịta mmadụ na ibe pụtara | Martech Zone
Friday, April 30, 2010 Mọnde, Febụwarị 10, 2014 Douglas Karr
Anyị niile na-agba àmà ya. Site na ọtụtụ ndị na-ajụ ase n'aka ha, anyị na-agba akaebe na mkpọtụ mkpọtụ na enweghị isi nke ụlọ ọrụ, ndị ọchụnta ego, na ndị mmadụ n'ofe Facebook, Twitter, na blọọgụ ụlọ ọrụ. Ọ na-eme mkpọtụ.
Ọ na-abụkarị okwu esemokwu na email ahịa… Ndị ahịa na-atụ anya ka ndị isi ha wepụta email kwa izu. N'ihi ya, ha na-eme ya. Ma ọ na eme nzuzu. Kama ịtụgharị, atụmanya nwere ike wepu aha.
Email marketing na-ewekwu ike karịa ịtụba nwelite ọkwa na saịtị mgbasa ozi kachasị amasị gị, n'agbanyeghị. Ndị ọhụụ ọhụụ a enyela ohere maka ụlọ ọrụ iji kwuo okwu talk nwata ga-eme ha. M na-etinyekwu oge ụbọchị ndị a na-emeghe, na-ewepu aha, na igbochi karịa ka m mere n'oge gara aga.
Enweghị ike ịgbachi nkịtị bụ otu n'ime mmejọ pụtara ìhè nke ihe a kpọrọ mmadụ. Walter Bagehot
Otu n'ime ndị enyi m (gbaghara - enweghị m ike icheta nke!) Mepụtara ezigbo echiche… Twitter kwesịrị inwe bọtịnụ nkwụsịtụ. Nke ahụ dị mma, anyị kwesịrị Twivo ka anyị nwee ike ịwụli tweets na-adịghị mma ma gakwuru ndị ahụ dị mkpa. Anyi adighi emegharia ma o bu igbochi… mana anyi na eme ka onye ahu mata na ha na ekwu okwu nke ukwuu. Enwere enyi na-ebi ndụ nzuko D&D ya? Kwụsịtụ!
Anaghị m atụ ndị ọzọ aka! N'ime izu ndị na-adịbeghị anya mmelite ọkwa m adịla ole na ole - m na-arụ ọrụ elekere 20 kwa ụbọchị iji soro ụfọdụ nnukwu ohere enyere m. Ihe m chọpụtara bụ na enwere m ọzọ na-eso ụzọ na Fans ugbu a karịa ka m mere mgbe m na-egwu mmiri ụbọchị niile.
E wezụga oge mgbe ọ nweghị ihe ị ga-ekwu, enwerekwa oge ị kwesịrị ikwu ihe ọ bụla. Ikpe mara m na nke a, Mgbe ụfọdụ, enweghị m ike iguzogide ohere ịme tufuo ogbunigwe a na-ekwu okwu n’ebe ahụ mgbe ihe na-adabaghị… ọ na-emekwa ka m yie ụfọdụ ịnyịnya ibu. Dị ka Erik Deckers tinye ya nke ọma, Oyiyi bu Ihe niile, Twitter bu Ruo Mgbe Ebighi-ebi.
Mkpọtụ na-eme ebe ahụ na-emezi na-akawanye ike. Ọ gwụla ma ị na-ekwu ihe dị mkpa, olu gị na-aghọ ụda na-agwụ ike na ndabere nke onye ọ bụla kwụsịrị ige ntị. Social apụtaghị na ị ga na-ekwu okwu mgbe niile; n'ezie, na-elekọta mmadụ bụ eleghị anya ihe banyere ige ntị karịa ihe ọ bụla ọzọ. Nye olu gị izu ike ma hụ ihe na-eme.
Tags: jụụkpuchie ọnụgbachi nkịtịusoro mgbasa ozi ọha na ezeihe nkiri walter
M na-ekerịta echiche gị, hapụ ụfọdụ ihe na-atụ anya ka ụmụazụ gị nwee ịnụ ọkụ n'obi maka tweet ọzọ gị, biputere, malite. Inweta ike ahụ dị mma karịa ị buụ ebe ahụ oge niile.
Mee 1, 2010 na 9: 27 AM
Amen Doug! Nke a bụ kpọmkwem ihe m na-eme nkwusa nwa oge. Gini mere ị ga-eji tie mkpu mgbe ị nwere ike ịgba izu? http://blog.cantaloupe.tv/blog/innovative-marketing/0/0/the-whisper-approach-to-online-video-marketing
Jenụwarị 16, 2011 na 7:47 PM
Nke a bụ ezigbo ama ebe a. Echere m na ọ siri ike inweta mmetụta nke twitter. Hụ ndị ọzọ niile na-apụ apụ ma na-amalite iche ma ọ bụrụ na ị ga-emekwu. Nke a na-enye aka.